Iindaba - Amashumi amabini ananye kaZwelonke (i-Guangzhou) yeNkcubeko yezeSondo, iiMveliso zaBantu abaDala, kunye neMveliso yezeMpilo Expo evulwe ngo-Novemba wokuqala!
Amashumi amabini ananye kaZwelonke (i-Guangzhou) yeNkcubeko yezeSondo, iiMveliso zaBantu abaDala, kunye neMveliso yezeMpilo Expo evulwe nge-1 kaNovemba!
Nge-1 ka-Novemba, i-20 (i-Guangzhou) yeNkcubeko yezeSondo, iiMveliso zaBadala, kunye neMveliso yezeMpilo Expo yavulwa kakhulu kwiPazhou Nanfeng International Convention kunye neZiko leMiboniso. Ixesha lomboniso nguNovemba 1-3. Le seshoni ibanjwe phantsi kwemeko elungileyo yokusebenza kukazwelonke, kwaye umxholo uthi "Oontanga abasempilweni kunye nentlalontle yesondo".
Xa kuthelekiswa nemiboniso yangaphambili, umboniso walo nyaka uzandisile iindawo zawo, wandise ubume bawo, unezinto ezintsha ezibalaseleyo, kwaye ubalasele ngakumbi. Indawo ephambili inendawo engama-20,000 eemitha zesikwere, kwaye indawo yesebe yi-3,000 yeemitha zesikwere semarike yabantu abadala yaseGuangdong. Ijolise kukuyila izinto ezintsha kunye nokwahluka kumalungiselelo eprojekthi kunye nakwindawo yokubonisa indawo. Inoveli iminquba ekhethekileyo, uyilo lwezibane ezimibalabala, kunye nemilo yeqonga elitsha Amava abonwayo aya kubahlaziya abaphulaphuli.
Ixesha Post: Apr-15-2020
Nceda ushiye imeyile yakho kuthi kwaye siya kuba kwebala zingadlulanga iiyure eziyi-24.
Ngeqela le-R & D lamalungu ali-10, sikhulula izinto ezintsha rhoqo, kwaye sanelise abathengi abaninzi kwi-ODM kunye neprojekthi ye-OEM.Njengomzi mveliso, sithatha UMGANGATHO, obaluleke kakhulu, Uninzi lwezinto zethu zidlulile izitifiketi ze-FDA, CE, RoHS, kunye ne-SABS .
IiVibrators zeSilicone, Clitoral Vibrator, Imivundla yemivundla, Amathoyizi eSondo aBasetyhini, I-G-Spot Vibrator, Iithoyi zesini zabantu abadala,